Wonke umntu uyazi ukuba awuyi kulungiselela umthendeleko ofanelekileyo, ngaphandle kwesonka kunye nemifuno, iimveliso zokubhema, i-sausages, ukusika kakhulu inyama, izitya ezimbini zeesaladi. Ngeentsuku zeeholide, ukusika kuya kuba mkhulu kakhulu. Kodwa, ngelishwa, kukho ukulimala kwamashishini kuyo nayiphi na imveliso. Kwintendelezo yekhulu lama-21 kunye nexesha elide eliqulunqiweyo, iindlela zekhaya ezenza ubomi bube lula kumntu. Mhlawumbi lixesha lokuyeka ukulondoloza kubantu abasondele kuwe kunye nawe? Ukuba ukhetha umsebenzi onobugcisa kwimicimbi yenkcubeko kunokuba usebenze ngemiguqo yamagesi, ezi zilandelayo ngcebiso.
Ngoko ke, i-knife ayizange ihambe khona kwaye yashiya isidlo sakho emunwe wakho. Ngokuzenzekelayo kwiminwe akukho zitya ezibalulekileyo, ngoko ungazigqithisi. Ukunciphisa ukulahlekelwa kwegazi, pha kamisa ingalo yakho.
Akuyimfuneko ukukhululeka kwentlungu kunye nenjongo yokuhlamba isilonda ukuze kufakwe umnwe, osikwayo, phantsi kwamanzi abandayo. Musa ukwenza oku, njengoko oku kwenza kube nzima ukuyeka ukuphuma kwegazi okanye ngakumbi, kuya kunceda ukuthelela umunwe wakho. Ukulimala okunjalo akufanele kuthatyathwe phantsi, kuba uMongameli waseMerika uJacob Garfield, wasweleka ngokunqunyulwa ngomunwe, ngenxa yokutyhelwa kwegazi.
Kwaye ke, singabantu abaphucukileyo, sinesixhobo sokuqala sencedo endlwini. Igcinwe ngokulandelelana kwaye igcwele izilungiso ezahlukeneyo zamanzi kunye neendlela zokukhusela. I-Plaster, i-antiseptics, ama-bandages - konke kukho. Buyela kumunwe osiweyo. Umsebenzi wokuqala kukukhusela isilonda kwintsholongwane. Apha uya kufuna iimpumelelo ze-pharmacology zanamhlanje.
Ndiyichitha kakubi isikhumba malunga nomnquma nge-iodine, ungathinti isilonda ngokwawo, kuya kwenza ukuphilisa kunzima kwaye kubulale amaseli aphilayo. Ukuhlamba isilonda, i-hydrogen peroxide ifanelekile. Awukwazi ukusebenzisa kwioli evulekile i-ichthyol, i-Vishnevsky amafutha kunye namanye amafutha ethu athandekayo.
Yintoni oyifunayo ngoku? Ungasebenzisi ibhanti eqinile, engenamsebenzi. Kukho inkohliso enye apha. Ukuba ubhinqa ngomnwe wakho, ngoko ke, kungakhathaliseki ukuba kunzima kangakanani, ngenxa yokuhamba ngokubanzi, uya kuba lusizi, "ukhathazekile" kwaye uphinde uphephe phantsi kwe-bandage. Ukuba isinqununu sinzulu kakhulu, emva koko inqabunga ingasenakudla. Ukongeza, xa kuya kubakho ukubopha isilonda, akulula kulula ukususa le bhanti ehambelanayo, ngaphandle kokubuhlungu.
Ukuthintela oku kungenzeki, sisebenzisa inkohliso encinane. Emva kokukhubaza i-disinfecting surface, faka iphepha eliqaqambileyo kwi-phalanx ewonakele yomnwe, ngenxa yale njongo ugxininisa umgca wephepha elijikeleze isilonda kunye ne-bactericidal plaster okanye i-bandage yenza i-bandage eqinile. Iphepha le-lubok liyakwazi ukulungisa imida ye-cut, engayi kubavumela ukuba bahlakaze xa behamba. Ngenxa yoko, isilonda siza kumisa ngokukhawuleza, kwaye isiqabana siya kuba singabonakali. Xa kuza kubakho ukubopha isilonda, kuya kuba lula kakhulu ukuhlula ibhanji kwiphepha. Iphepha elinamathela ngokwayo lingasuswa xa lixutywe ngesisombululo se-furacilin okanye sinyunyiwe kwi-hydrogen peroxide.
Ngokuqinisekileyo, uyaqonda ukuba akuyiyo yonke iphepha efanelekileyo kwezi njongo. Ngokomzekelo, i-newsprint eprintiweyo eenkini iqukethe amaninzi amaninzi. Iphepha elimhlophe kakhulu lomshicileli, likhutshelwe i-peroxide.
Unyango lwexilongo olungapheliyo lwamachiza omntu
Ukunyangwa kwabantu kwiintsholongwane
Iipropathi zokwelapha zeengxube: zokupheka, isicelo, inkcazo
Ikhukhi nge jam
Marinade nge shish kebab
Ukugcina i-balage-indlela yokwenza imfashini yokwehla ngaphandle kokulimaza iinwele
Isiqalekiso "seNdlu-2"? UAliana noAlexander Gobozov bahlula iindlela
I-horoscope yesondo: i-Aries, iTaurus, iGemini
Iimvini Zelanga: Ziyimfihlo Zithathu Okufuneka Uzazi
Ukutya okuphezulu kakhulu kweekhalori ezonakalisa umfanekiso
I-Lioness kunye neGemini: Ukuhambelana
Umyeni nomfazi abathandani
I-Technique yokuzihlaziya i-massage erotic
Yintoni elindele iGemini ngo-2014
I-Lemon kunye ne-pancake yengqolowa